Ukusinda isongo kunye nefektri yefektri - China Ukusinda isongo kunye neParacord abavelisi kunye nabaxhasi
Ngaba ukhe wakubukela “ukusinda endle”? Kule nkqubo, inkwenkwezi edumileyo inxiba iintsimbi kunye neparacord. Kungcono izixhobo zokusinda endle. Isacholo sokuphila sisetyenziselwa amayeza, kubandakanya izixhobo ezininzi ezinje ngemela, imithetho, ikhonkco yekhabhathi, ikhampasi, ibarometer njlnjl Imela inceda ukuloba amasebe xa iyimfuneko endle. Iiparacords ziyimfuneko xa unyuka endle. Ubume bendalo endle kubaluleke kakhulu, kunokukunceda, mhlawumbi ugcine ubomi bakho. Ngaphandle kokusebenzisa endle, ezi kunokuba zizixhobo zokusinda kubomi bemihla ngemihla ukunqanda ukwenzakaliswa ngabaphuli mthetho. Ukubumba kukhululekile ukuba ukhetha uyilo olukhoyo, i-350/480/550 Paracord kunye neplastikhi. Inokongeza ilogo yelogo ebhalwe kwi-bopha yeplastiki okanye inokongeza kunye ne-logo tag. Ubungakanani obuqhelekileyo yi-205 (L) * 22 (W) mm yesongo. Okanye ukuba abathengi bakhetha ubungakanani obulungiselelwe wena, wamkelwe. Ukusebenza nathi, uya kuba nomtsalane kwimiba yoyilo, umgangatho, ixesha lokuhambisa, kunye neyona nto ilungileyo emva kwenkonzo yokuthengisa.
Amasongo okusinda kunye neeparacord